Kiraro, vehivavy kiraro, vehivavy kiraro - kiraro Ruchun
Safidy-kiraro sy fitsangatsangananaShoes
Mamolavola sy ataovy modely maimaimpoana arak'izay ilain'ny mpanjifa.
Ataovy ny famokarana araka ny fanamafisana santionany sy ny takian'ny mpanjifa.
Fandrindrana boky miaraka amin'ny mpanolo-tsaina voatendry na mpanolo-tsaintaina.
LOHATENY TOHANAO MAHAFINY
Manana orinasa roa izahay, zotram-pamokarana 3 miaraka amina fitaovana maoderina feno, mpiasa 300 mahery. Ny vokatra lehibe dia misy kiraro fanatanjahan-tena, kiraro fanatanjahan-tena, kiraro fitsangantsanganana ho an'ny olon-dehibe sy ankizy.Ireo tanjona dia ny hanomezana kiraro avo lenta miaraka amin'ny vidiny mifaninana!
Vehivavy kiraro fotsy RCWP202003
Andininy No.: RCWP202003 Mpanome: WOMEN Co ...
Kiraro skate ankizy RCKP202002
Andininy No.: RCKP202002 Fanolorana: BOYS & ...
Article No. .: RCW202001 Mpanome: WOMEN Col ...
Article No. .: RCNP202001 Mpanome: GRAY, BLAC ...
Lehilahy kiraro Casual RCNP202002
Article No. .: RCNP202002 Gender: MEN Colo ...
Vehivavy kiraro Dada RCWP202002
Andininy No.: RCWP202002 Mpanome: WOMEN Co ...
Mid Cut shoes RCNP202003
Article No. .: RCKP202001 Mpanome: BOYS Col ...
Article No. .: RCNP202003 Mpanome Tolotra: MEN Colo ...
FuJian JinJiang Ruchun Shoes Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2013 ary hita ao Quanzhou, faritanin'i FuJian, mitontaly faritra 9600 metatra toradroa ary manana mpiasa 300 mahery. Izahay dia mpanamboatra kiraro matihanina manokana izay kiraro fanatanjahan-tena kiraro, fanatanjahantena miaraka amina endrika maoderina ho an'ny lehilahy, vehivavy ary ankizy. Manana fitaovana famokarana mivoatra, fahaizan'ny R&D tsy miankina ary ekipa QC matanjaka isika.Hisy fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ireo mpivarotra, mpivarotra ary varotra manerantany.Ireo marika malaza izay niara-niarahanay dia toa ny FILA, POLO Etazonia, PIERRE CARDIN, AUSTRILIAN, KAPPA, AIRWALK , DUCATI, CHAMPION, UMBRO, sns.
NY ZAVA-MISY ZAVA-MISY
Manana orinasa roa misy tsipika famokarana 3 izahay ary manana orinasa roa miara-miasa maharitra 10 mahery. Misafidiana izahay dia midika hoe mifidy vidiny mora kokoa ho an'ny base vokatra mitovy amin'ny vola mitovy.
Manamboatra orinasa ary ampandehanana ny BSCI isan-taona ary afaka miara-miasa amin'ny mpividy manao fanaraha-maso trano hafa raha ilaina.
Ny ekipa matihanina sy ny fampandrosoana natao hanome serivisy serivisy.
Fitaovana fanaraha-maso sy fanandramana kalitao matihanina hiantohana ny kalitao tsara.
FIVAROTANA FANAO IZAO
Ny fanontaniana rehetra na ny valinteninao amin'ny alàlan'ny mailaka dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora. Ary raha manantena ny hamaly ianao avy hatrany, dia aza misalasala manampy ny WECHAT 0086-13030971530.
Tianqin Technology Building, West Garden Distric, Jinjiang, Quanzhou, China
Miverina ho an'ny Milan Men's Digi ny kiraro Dada ...
Ny mpitarika ny lamaody sy ny tongotra dia niantso "Co ...